Kutheni ubushushu buhlala buhleli ngexesha loTshintsho lweSigaba
Ndiyabulela kwi-physics, siyayazi loo nto iphe ayinalo utshintsho zenzeka xa izinto zitshintsha imeko, zisuka kulwelo ziye kwinto eqinileyo (njengaxa amanzi eqina), ziqine zibe lulwelo (njengaxa amatye enyibilika eludakeni), ulwelo luye kwigesi (njengaxa ubilisa amanzi weti), njalo njalo. Xa umbandela obuzwayo utshintsha ubume obutsha-obulwelo, obuqinileyo, okanye igesi (unokubakho kwimeko yesine: iplasma, imeko efana negesi) -obunye ubushushu bungena okanye buphume kwinkqubo ngaphandle kokutshintsha ubushushu.
Unokuba nezinto eziqinileyo ezijika ngokuthe ngqo zibe yigesi. Njengokuba umkhenkce owomileyo (igesi enomkhenkce ekhenkcezisiweyo) usiya ushushu, ujika ube yigesi yecarbon dioxide. Le nkqubo ibizwa ngokuba Sublimation.
Khawufane ucinge ukuba usela i-lemonade yakho cwaka kwitheko elingaphandle kwegadi. Uthatha umkhenkce ukupholisa ilamunade yakho, kwaye umxube kwiglasi yakho ngoku sisiqingatha somkhenkce, isiqingatha semonade (onokucinga ukuba sinobushushu obufanayo njengamanzi), nobushushu obungu-0 ngokukaCelsius ngokufuthi.
Njengoko ubambe iglasi kwaye ubukele isenzo, umkhenkce uqala ukunyibilika - kodwa imixholo yeglasi ayitshintshi ubushushu. Ngoba? Ubushushu (amandla obushushu) angena kwiglasi evela emoyeni wangaphandle anyibilikisa umkhenkce, awufudumezi umxube. Ngaba oku kuyayenza i-equation yamandla obushushu
ngamampunge? Akunjalo konke konke - kuthetha nje ukuba inxaki ayisebenzi kutshintsho lwesigaba.
Ukuba wenza igrafu ubushushu obongezwe kwinkqubo xa kuthelekiswa nobushushu benkqubo, igrafu ihlala ithambeka inyuka; ukongeza ubushushu kwandisa ubushushu. Nangona kunjalo, amanqanaba egrafu aphuma ngexesha lotshintsho lwesigaba, kuba kwinqanaba leemolekyuli, ukwenza imeko yotshintsho lweziyobisi kufuna amandla. Emva kokuba yonke into itshintshe imeko, amaqondo obushushu anokuphakama kwakhona.
Ukutshintsha kwesigaba samanzi.
Khawufane ucinge ukuba umntu othile uthathe ibhegi yomkhenkce kwaye ngokungacingi wayibeka esitovini. Phambi kokuba ifike esitovini, umkhenkce wawukubushushu obungaphantsi komkhenkce (–5 degrees celcius), kodwa ukubekwa esitovini sekuzakutshintsha oko. Ungalubona utshintsho olwenzeka kwifom yegrafu kulo mzobo. (Ubushushu obukhethekileyo bomkhenkce bujikeleze i-2.1 x 103J / kg-C)
amaqondo obushushu omkhenkce aya kunyuka ngokuhambelana njengoko usongeza ubushushu kuwo, njengoko ubona kwigrafu.
Nangona kunjalo, xa umkhenkce ufikelela kwi-0 degrees celcius, umkhenkce uba shushu kakhulu ukubamba imeko yawo eqinileyo, kwaye iqala ukunyibilika, ithathe utshintsho kwisigaba. Xa unyibilikisa umkhenkce, ukophula isakhiwo somkhenkce kufuna amandla, kwaye amandla afunekayo ukunyibilikisa umkhenkce anikezelwa njengobushushu. Kungenxa yoko le nto igrafu ekumanqanaba emizobo ashiye phakathi - umkhenkce uyanyibilika. Ufuna ubushushu ukuze wenze indawo yokutshintsha komkhenkce ukuya emanzini, ke nangona isitovu songeza ubushushu, iqondo lobushushu lomkhenkce alitshintshi njengoko linyibilika.
Njengoko ubukele ingxowa yomkhenkce esitovini, nangona kunjalo, uqaphela ukuba wonke umkhenkce ekugqibeleni uyanyibilika ungene emanzini. Kuba isitovu sisongeza ubushushu, iqondo lobushushu liqala ukunyuka, olibona kulo mzobo. Isitovu songeza ubushushu ngakumbi emanzini, kwaye ekuhambeni kwexesha, amanzi aqala ukubhobhoza. Hayi, ucinga. Olunye utshintsho kwisigaba. Kwaye unyanisile: Amanzi ayabila kwaye aba ngumphunga. Ingxowa ebambe umkhenkce ibonakala yomelele, kwaye iyanda ngelixa amanzi ejika abe ngumphunga.
Ulinganisa ubushushu bamanzi. Umtsalane - nangona amanzi ebilisa, ajika abe ngumphunga, ubushushu abuguquki. Kwakhona, kufuneka wongeze ubushushu ukukhuthaza utshintsho kwisigaba-ngeli xesha ukusuka emanzini ukuya kumphunga. Uyabona emfanekisweni ukuba xa usongeza ubushushu, amanzi abilayo, kodwa iqondo lobushushu lala manzi alitshintshi.
Kuza kwenzeka ntoni ngokulandelayo, njengoko ibhegi idumbela kumthamo omkhulu? Awusoze ufumanise, kuba ibhegi ekugqibeleni iyaqhuma.
umnqonqo atrophy zolgensma
isetyenziselwa ntoni i-ampicillin
isetyenziselwa ntoni ii-hibiclens
Iiprobiotic ngelixa zithatha i-antibiotics
ngequbuliso iintlungu ezibukhali phantsi kwembambo yasekunene
Uluhlu lweziyobisi lwe-rheumatoid arthritis
Iziphumo zexesha elide zecymbalta